KACHIN NATION: 2013
MORE++++CLICK ON LINK+++
KIC Ningbaw Malai2a mungga - Nang hpam hpe shamyit ra sai
UNFC..ဟာ,ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပြီးစစ်ရေးမည်ကဲ့သို့ကောင်းအောင်၊ တောင့်တင်းအောင်တည် ဆောက်ရမည်ကိုအဓိကဆွေးနွေးရမည်။
BY: than shwe
UNFC..နှင့်..KNU..ဘယ်တော့မှလိုက်မမည်ကြဘှုး...ဒါ့ကြောင့်နှစ်ပေါင်း..50.., 60..,တိုင်တိုင်တိုင်းရင်းသားနေမြေမှာ၊ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာခံစားနေ ရတယ်၊ဖက်ဆစ်ဗမာစစ်အုပ်စု၊တိုင်ရင်းသားဒေသဖက်မှာ တချိန်လုံးစစ်ရေးပြင်ဆင်မူ၊ စစ်အင်အားတိုးချဲ့မူ၊ ပြုလုပ်နေတာကောဘာကြောင့်ထိုင်ကြည့်
KIO/KIA..ဆိုင်း SIGNATURE ဘယ် ခေါက်ထိုးပြီလည်း....?
လူကြားကောင်းအောင်ဟန်ဆောင်လုပ်ပြပြီး၊ နိူင်ငံခြားက၊ငွေကြေးအကူအညီ၊ စစ်ရေး
Kachin ni Hta Ra nga ai Maigan Mungdan ni hteading tawk lu matut mahkai na daram Greng ai U Hpung ni ....
Kachin Yawng A Gawng Malai
1.Ga Gale Hpung
2.Tsi Du Hpung
3. Tara Kasa (Gyi)Hpung
5. Media Hpung
6.N-Ga n Tsa -Kata N Hprang hte seng nna Gawn Sagawn Chye Chyang Ning Hkring Hpung
7.Jawng Ma Hpung
8.Ramma Hpa Awn ...
9. Maigan Kyit Hkai (dat kasa)Hpung !! (Bu Hkawm Bu Sa A matu hte hpawm)
10. Bawng Dung Htawng Rawng nga ai ni hpe Gawan Katsan na Hpung
12. Mayun Kumhpa Jaw, Sha re ai ni hpe Ding lik jep Joi na Hpung !!
13.Shing Gyim A hkaw A Hkang hte seng ai Hpung
15.Jau Gawng Muk Hkyu Hpung !
16. Ginsup (sport) Hpung (...............
17.Myit Sawn Shingran Hpung
Ra ai hkrai hkrai rai wa ai le i .... MLH
ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ဗမာစစ်အုပ်စုကြောင့် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ စစ်ဖြစ်ရတာပါ
From: "Seng Maran" <sengging@gmail.com>
Date: Oct 12, 2013 5:47 PM
ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ဗမာစစ်အုပ်စုကြောင့် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ စစ်ဖြစ်ရတာပါ၊
ဖက်ဆစ်ဗမာစစ်အုပ်စု 6အာက် ဗမာပြည်ပြန်သွားရင်/Nation Wide Ceasefire. ဆိုင်းထိုးစရာမလိုပါဘူး၊ထာဝရငြိမ်းချမ်းသွားမှာ၊
ယခုကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ဗမာစစ်အုပ်စုအလိုရိုသော၊ Nation Wide Ceasefire..,ကိုအလွယ်တကှုဆိုင်းထိုးပေးခဲ့ယင်၊UNFC..မိမိဖင်ပေါက်ကို..,ဆပ် ပြာနှင့်သေချာစွတ်ပြီးမိမိတို့ဖင်ပေါက်ကို၊ဗမာဖက်ဆစ်အုပ်စုကိုစိတ်ပြေနပြေခံပေးကြပေတော့။
ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးရသွားရင် ငါတို့ဖါသာရပ်တည်နိုင်ပါ့မလားဆိုပြီးသွေးကြောင်နေသူတွေကို ကျုပ်ပြောမယ်။
သယံဇာတ ဆိုတာတွေမထိပဲ ကချင်ပြည်သူ ကို ဝဝကျွေးနိုင်တယ်။
ဘယ်လိုကျွေးနိုင်မှာလည်း ဟုတ်လား ။ အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ကို လမ်းဖွင့်ပြီးအခွန် ကောက် မယ်/ဧရာဝတီမြစ်ကြီးမှ ရေ ကို သန့်ပြီး ရောင်းမယ်။ ဒါနဲ့တင်လောက်နေပါပြီ။ ကျန်တာ စိုက်ပျိုးရေးတို့ ဟိုတယ် ခရီးသွားလာရေး/စားသောက်ဆိုင် မျိုးစုံရှိသေး။
မပူပါနဲ့။ အမြည်းလေးပဲနော်။ စစ်ရေး/နိုင်ငံရေး/ဘာသာရေး/ပညာရေး/ကျန်းမာရေး ဒါတွေလည်းပူစရာမဟုတ်ဘူး။
2018 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ တွင်
ကချင်နိုင်ငံ၏မြို့တော် မြစ်ကြီးနား၌ နိုင်ငံတကာ လေယာဉ်ကွင်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအားစည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် ၁၂ ရက်နေ့ တွင်မူ အာရှပတ်လမ်း အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ပြည်ကိုဆက်သွယ်ထားသော လီဒိုလမ်းမကြီး နှင့် ရထား/ကားလမ်းအားတပါတည်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုပွဲ နှစ်ခုလုံးအား ကချင်သမ္မတ ................ မှဖွင့်လှစ် ပေး ကာ မိန့်ခွန်းပြောကြားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။လွတ်လပ်သော ကချင်နိုင်ငံ၌မှီတင်းနေထိုင်သော လူမျိုးပေါင်းစုံဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် အဆို/အက ရိုးရာပေါင်းစုံဖြင့် ကြွရောက်လာသူများအားဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။ လုံခြုံရေးအား ဝေဟင်မှ ကချင်လေတပ်မတော် KAF နှင့် မြေပြင် ၌ ကချင်တပ်မတော် KA နှင့် ကချင်ရဲ KP အားလုံးစုစုပေါင်း အင်အား ၁၀၀၀၀ ဖြင့်တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ မြို့တွင်း စားသောက်ဆိုင်/တည်းခိုခန်း/ဟိုတယ်လ် နှင့်ခရီးသွား ဝန်ဆောင်မှု့များအားအထူးလျှော့ဈေးဖြင့်ဆောင်ရွက်သွားရန်စီစဉ်ထားပါသည်။နိုင်ငံခြားမှလာချင်သောသူများအတွက် ထိုလ၌ဗီဇာအခမဲ့ပေးရန် နိုင်ငံတကာ ကချင်သံရုံးဝန်ထမ်းများအားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ......... မှညွှန်ကြားထားသည်။ဗီဇာမလိုသောနိုင်ငံများအား လေယာဉ်လက်မှတ်များအထူးလျှော့ဈေးဖြင့် Kachin Airways မှရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်။
shared Saiga Brang's photo.
ယနေ.ကချင်တွေတော်လှန်နေတာကဗမာလူမျိုးကိုမဟုတ်ပါ။။မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအထဲမှာအောက်လမ်းနည်းပညာနဲ့ထည့်ထားတဲ့စစ်ကျွန်ဆက်ပြုရေး၂၀၀၈( မူ ) ကိုအဓိကပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။။။။။ဒါကြောင့်။။။
(၁) ၂၀၀၈မူကိုကိုင်စွဲတဲ့အစိုးရ (၂ )လယ်သိမ်းယာသိမ်းအစိုးရ (၃)ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့အစိုးရ (၄) တိုင်းရင်းသူများအားမတရားသတ်ဖြတ်၊မုဒိမ်းကျင့်သောအစိုးရ (၅)အမိမြေအားတရုပ်လက်သို့ဥပဒေမဲ့ကိုယ်ကျိုးရှာရောင်းစားနေသောအစိုးရအမည်ခံလူ
ဗမာစစ်တပ် လိုင်ဇာသို့ ပစ်ခတ် အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ နှစ်ဦးသေဆုံး
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော လိုင်ဇာမြို့ပေါ်သို့ ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်မှ ဇန်န၀ါရီ (၁၄) ရက်မနက် (၈း၁၅) နာရီ အချိန်ခန့်တွင် လက်နက်ကြီးဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာစစ်တပ်၏ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့် လိုင်ဇာမြို့မှ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ နှစ် ဦး သေဆုံးသွားကြောင်း သတင်းကြားသိရပါသည်။ သေဆုံးသူများမှာ ခရစ်ယာန် သင်းထောက်ဆရာ ဦမလန်ယော်နှင့် ဦးအင်ခွန်ဘောက် တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်များသည် ပြည်သူလူထုများ နေထိုင်သော ရပ်ရွားများနှင့် ဒုက္ခသည်များ ခိုအောင်းရာ စခန်းများသို့ တမင်ချိန်ရွယ်ပစ်ခတ် ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ကေအိုင်အေ အပေါ် ပြည်သူလူထု အမြင်စောင်းလာစေရန် ယခုကဲ့သို့ ပြည်သူလူထုကို ရည်ရွယ်ပစ်ခတ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Posted by Tawk Hkam at 10:08 PM
Ya aten gaw, Myitkyina hte Manmaw kaw na Myen Hpyen Nbungli Daru ni
hpe mung hkyak hkyak nan wa htim gasat lu yang kaja na re.
Bai nna Miwa ni kaw na Tear Gas ( Myiprwi Bom) ni hpe mari lang let
Wunawng Wuwa hte lung wa ai Myen Hpyenla nialapran de gap bun yang
mung kaja na re ngu, ngai mu mada ai lam ni hpe ka shana dat ai yaw.
Ngai mung akyu hpyi garum nga nngai.
Hpawt ni kaw nna gaw ngai hkum nan tatut hkawm sa galaw ra sai lam hpe
shana dat ai yaw. Nyeamatu mung bai akyu hpyi garum ya marit yaw.
Ndai lam ni hpe seng ang ai de lawan ladan tsun ya rit le. Ngai tsun
dan na matu yak taw ai majaw re yaw. Karai Kasang shaman ya u ga.
Ngai hpe myen hpyen dap kaw nna pru mat ai Myawk Dap kaw nna Jinghpaw
la langai tsun dan ai hpe mung bai shana dat ya ai yaw.
Shanhte Myawk Dap ni kaw nna gaw Yu Reng ai wa gaw
(Binoculars) lang nna gara shara de gap na matu matsun ai. Bai nna
marai lahkawng gaw Machyu pala hapi bang ya ra nna, shingte ngut ai
hpang sumri gang nhtawm gap bun ai re. Shanhte Myawk Dap ni gaw san
san nga ra ai ni re, nga nna tsun dan lai wa sai re. Dai La gaw, moi
Karen ni hpe gasat ai hta lawm wa ai mung re. Shi tsun ai hta Karen ni
hpe dang ai gaw Myawk Kaba gap garum ai majaw re nga nna ahkyak la nna
tsun dan ai.
Ngaianingmu gaw, ndai Myawk Dap ni nga ai shara shagu hpe KIA ni hku
nna matsing la nhtwam Hang Kai Bum kaw na zawn wa htim nna jahten kau
ya jang gaw shanhte ni n gun kya mat na re. Bai nna lu sha hte lu hka
ni hpe mung shakyet kau ya jang, hpyen luk suk ni gaw gara hku mi
raitim, n gun kya mat na re ngu, ngai mu mada ai lam ni hpe seng ang
ai ni hpang de lawan ladan tsun dan ya marit yaw. Karai Kasang shaman
ya u ga.
Kam hpa let,